Rev. Nuam San Uap – Full Gospel Assembly
Rev. Nuam San Uap
သိက္ခါတော်ရ ဆရာမနွမ်းစန်းအွတ်သည် ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ တီးတိန်မြို့နယ်၊ ဟိန်ဇိန်ကျေးရွှာမှအဘဦးထျန်းဇခိုင်နှင့်အမိဒေါ်ကျင်းပေါင်တို့၏သားသမီး(၄)ဦးအနက်တတိယသမီးဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၈၉-၁၉၉၃ခုနှစ်တွင် သူငယ်တန်းမှတတိယတန်းအထိ ဟိန်ဇိန်ကျေးရွှာ မူလတန်းကျောင်းတွင်၎င်း၊ ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် စတုတ္ထတန်းကို ခေါ်ဆကျေးရွှာ မူလွန်ကျောင်း၌၎င်း၊ ၁၉၉၅-၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် ပဉ်စမတနျးမှ အဌမတန်းကို အ.လ.က(၉)အင်းစိန်၌၎င်း၊ ၂၀၀၀မွ ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင်နဝမတန်းမှာ ဒသမတန်းအောင်မြင်သည့်အထိ အ.ထ.က.(၃)မြောက်ဒဂုံ၌၎င်း တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ပါသည်။အထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ပြီးမှ ဒဂုံတက္ကသိာလ်တွင် အဝေးသင်ဖြင့် တက်ရောက်၍ ၂၀၀၅ပညာသင်နှစ်တွင် စိတ်ပညာအထူးပြုဘာသာဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။
ငယ်ရွယ်တုန်းအချိန်ကတည်းက ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားတတ်ပြီးယုံကြည်ခြင်း ၊ ဆုတောင်းခြင်း၌ အားကြီးသူဖြစ်သည်။ ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် ရေနှစ်ခြင်း မင်ဂလာခံယူကာ ထိုနှစ်တွင်ပင် ဝိညာဉ် နှစ်ခြင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၄ ၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Full Gospel Bible Training Centre အပတ်စဉ်ကိုး တွင် Dip ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၀၅ ၊၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း FGBTC ကျောင်းတော်ကြီး၏ အဆောင်မူးအဖြစ် ဆက်ကပ် ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ခုနှစ် မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် Full Gospel Assembly အသင်းတော်၌ အချိန်ပြည့် အမှုတော်ဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ္လ ၁၀နေ့တွင် လိုင်စင်ရဓမ္မအမှုတော်ဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် သိကျခါတောရြ အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လည်းကောင်း ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေး၍ ချီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။
ယခုလက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော အမှုတော်လုပ်ငန်းမှာ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့ နယ်မြေတာဝန်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ဧဝံဂေလိ အဖြစ်လည်းကောင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်မေလ ၂၃ရက်နေ့တွင် အဘဦးစိုးမြင့်နှင့် အမိဒေါ်ကျင်ရွှေတို့၏သား ဦးမျိုးသက်နိုင်နှင့် အိမ်ထောင်ကျကာ
သား(၃)ဦးဖြစ်သော မောင်ခိုင်ချင့်နိုင်၊ မောင်ညီခန့်နိုင်နှင့်မောင်ပေါင်စွမ်းနိုင်ထွန်းကားပါသည်။
အိမ်အမှတ်၁၉၁၊အလတ်ချောင်းရပ်ကွက် ၊အလယ်ရွှာ၊ တွံတေးမြို့နယ်တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။
ဆရာမစွဲကိုင်သောကျမ်းချက်မှာ ဖိလိပ္ပိ(၄:၆-၇) အဘယ်အမှုကိုမျှ စိုးရိမ်ခြင်း မရွိဘဲ အရာရာ၌ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်း နှင့်တကွ ဆုတောင်ပဌနာ ပြုသော အားဖြင့်၊ သင်တို့တောင်းပန်လိုသော အရာများတို့ကို ဘုရားသခင်အား ကြားလျှောက်ကြလော့။ (Phi 4:6) ထိုသို့ ပြုလျှင် အဘယ်သူမျှကြံ၍ မမှီနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ငြိမ်သက်ခြင်း သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် သင်တို့၏စိတ်နှလုံး တို့ကို စောင့်မလိမ့်မည်။ (Phi 4:7)